Thwebula TeamSpeak 3.0.19.4 Client futhi 3.0.13.6... – Vessoft
TeamSpeak – a isofthiwe ethandwa sokukhulumisana ngezwi emkhatsini abasebenzisi inthanethi. I softwatr ikuvumela ukudala iseva kwakho siqu kanye nokunikeza abasebenzisi nge Moderator amalungelo abangakwazi ukuxosha, bamema noma yokuvimbela ukungena isiteshi. TeamSpeak isekela yezwi noma mechanical imiyalo kusebenze microphone, kuhlanganisa eyakhelwe-in lengxoxo futhi ikuvumela ukuthumela amafayela kubasebenzisi. Isofthiwe libuye likuvumela ukuxhuma kwalokho of Overwolf for extension amathuba functional.
Eliphezulu ngezwi Ukukhulumisana
Ukudala izilungiselelo leseva sakho siqu
Ukuthumela amafayela kanye chat eyakhelwe-in
Ukuxhumanisa ukwengeza Overwolf
Amazwana on TeamSpeak:
TeamSpeak Ahlobene software:
Français, Español, Deutsch, 中文... ooVoo 3.6.9.10